ဘဝမှတ်တိုင်: ပန်းအိုးလှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်မယ့် - Let’s Create! Pottery v1.54 Apk
ပန်းအိုးလှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်မယ့် - Let’s Create! Pottery v1.54 Apk
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ အနုပညာဆန်ဆန် အလှအပဖန်တီးချင်သူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ Let’s Create! Pottery ဆိုတဲ့ Application လေးနဲ့ Android ဖုန်းထဲမှာ ပန်အိုးလေးတွေ ကို အရောင်ခြယ် ဒီဇိုင်းဖော်ပြီး အလှဆင်လို့ရပါတယ်။ သူ့မှာပေးထားတဲ့ ပန်အိုးမျိုးစုံ ကို အရောင်တွေ အရုပ်လေးတွေ ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ပန်းအိုးလေး တစ်အိုးအဖြစ် ဖန်တီး ယူနိုင်ပါတယ်။ အခု Application လေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး အပျင်းပြေပြီး စိတ်ငြိမ်တာပေါ့ဗျာ။ အထူးသဖြင့်တော့ အခု Application ကို ကျွန်တော့်ညီမတွေအမတွေကပိုပြီးနှစ်သက်လိမ့်မယ် ထင်ပါ တယ်။ အောက်မှာအလှဆင်ပြီးသား ပန်းအိုးလေးတွေနမူနာပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.0.1 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/26/2014 08:46:00 pm